Faahfaahin ka soo baxayso duqayn Maraykanka uu ka gaystay Saakow | Jubbaland Media Online
Faahfaahin ka soo baxayso duqayn Maraykanka uu ka gaystay Saakow
Posted on June 11, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Dana White oo ah afhayeen u hadashay Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa ka hadashay weerarkii saaka lagu qaaday degaanka Saakow ee gobolka Jubadda Dhexe.
Miss White waxay sheegtay in 11ka bishan June, saacaddu markii ay ahayd qiyaastii 2 saqda dhexe ka dib ay Wasaaradda Gaashaandhigga ee Marayakanku qaadday weerar ka dhan ah ururka Alshabab ee Somalia.
Afhayeenka ayaa sheegtay in weerarku uu ka dhacay qiyaastii 185km dhinaca koonfur-galbeed ee magaalada Muqdisho, iyada oo weerarkaas ay ku dhinteen 8 maleeshiyadii la weeraray ka mid ah.
Afhayeenka ayaa sheegtay in iskaashi dhex maray Maraykanka iyo dadka ay wada shaqeynta leeyihiin. Talaabadan ayaa afhayeenku sheegtay in jawaab toos ah ay u tahay falalka Alshabab, sida mid dhawaan uu ururku ku qaaday ciidanka Somalia.